Photocall TV: iyo chaiyo gwara rekuona TV neredhiyo chiteshi zvemahara | Linux Vakapindwa muropa
Photocall TV inzira nyowani yekutarisa terevhizheni neredhiyo chiteshi izvo zviri kuwedzera mukurumbira. Mashandiro ayo akanaka chaizvo kana achienzaniswa nemamwe marongero aripo, pamusoro pekunge wakasununguka zvachose uye uine repertoire hombe yezvirimo pane zvese zvido. Kubva pamatanho ehunyanzvi senge evana, kune akajairwa DTT, kuburikidza neyevanhu vakuru zvemukati, mitambo, nezvimwe, ine huwandu hunopfuura mazana gumi nematanhatu ematanho.
Chinhu chakanaka nezve iyi chikuva ndechekuti, kuve webhu, izvo iwe unogona kuona kubva kune chero webhu bhurawuza pane yakawanda michina, mukuwedzera pakutsvaga madhairekitori, zvinongedzo zvekushandisa maVPN, ruzivo rwekushandisa, nezvimwe.
1 Chii chinonzi Photocall TV?
1.1 Pane nzira ngani? (zvirimo)
1.2 Zviri pamutemo here?
1.3 Rinoshanda sei?
1.4 Photocall TV mhando uye kugadzikana?
1.5 Ndinofanira kubhadhara?
1.6 Ndezvipi zvishandiso zvainogona kushanda pairi?
2 Maitiro ekuona Photocall TV pane yangu kifaa
2.1 Tarisa Photocall TV online paPC yangu
2.2 Wona Photocall TV pane yangu mbozhanhare
2.3 Ona Photocall TV pane yangu Smart TV
3 Dzimwe nzira dzekuona DTT neredhiyo
Chii chinonzi Photocall TV?
Photocall TV iri webhu chikuva chakatsaurirwa kune audiovisual zvemukati Ukangosvika iwe unozokwanisa kuona runyorwa rukuru rwenyika DTT terevhizheni chiteshi, dzepasi rese chiteshi zvakare kuvhura, mamwe ayo anosanganisira hombe huru yemahara uye yekubhadhara nzira ine dzakasiyana dzakasiyana (vana, vakuru, mabhaisikopo, mitambo, zvinyorwa, …), Uye zvakare redhiyo.
Zvese izvi zvemukati zvinowedzeredzwa kuyerera online uye iri pamaseva echitatu-bato, sezvo Photocall TV isiri kambani yekutenderera seNetflix, HBO, nezvimwe.
Pane nzira ngani? (zvirimo)
Icho chiri kumboshanduka nekufamba kwenguva, asi parizvino chine zvinopfuura mazana gumi nematanhatu ematanho aripo, neTV neredhiyo. Iyi migero ndeyenyika uye zvakare yepasi rose. Semuenzaniso, iwe paunowana Photocall TV iwe uchaona anotevera ezvinyorwa tebhu.
Nationals: iwe unogona kuwana anopfuura mazana maviri emahara eDTT chiteshi, senge yeruzhinji chiteshi La 200, zvakavanzika nzira dzakadai seAntena 1, La Sexta, Telecinco, pamwe nematunhu enharaunda akadai seCanal Sur, nezvimwe.
International: pane hombe runyorwa rine zvinopfuura mazana mana chiteshi kubva kune dzimwe nyika muEurope, America neAsia. Mimwe mienzaniso ndeye CBS, CNN, FOX, NBC, BBC, ABC, nezvimwe.
vamwe: mukati mukati iwe une iwo mahedheni chiteshi enhau, mitambo, mimhanzi, cinema, vana, komedhi, uye kunyangwe zvevakuru zvemukati. Pakazara, ivo zvakare vari pedyo ne400.
redhiyo: kana izvo iwe zvaunoda kuve nekugona kuteerera kune yako yaunofarira redhiyo, iwe unogona zvakare kuwana zvinopfuura mazana maviri maredhiyo mune ino imwe chikamu. Nezvematongerwo enyika, kuungana kwevanhu, mimhanzi, nezvimwe. Semuenzaniso, une nhepfenyuro dzazvino dzenyika dzakaita seCOPE, Onda Cero, RNE, kana nhepfenyuro dzemitambo dzakadai seRadio Marca, RAC 200, Radio Sevilla, pamwe nemimhanzi yakadai saDial, Los 1, Europa FM, nezvimwe.
Inotungamirira: pano haungawane redhiyo kana terevhizheni chiteshi, asi iwe unowana zvinonakidza zvirongwa zvemapurogiramu ekuramba uchiziva nezvose zvinotepfenyurwa munzira dzakasiyana. Ivo havasi ivo vatungamiriri chaivo, asi zvinongedzo kune anonyatso kuzivikanwa madhairekitori, senge Movistar +, TV Guía, Fórmula TV, nezvimwewo, ine huwandu hwese gumi nemana ma link.
Info: chikamu chaunogona kuwana ruzivo nezve Photocall TV, senge kero yeemail yekuonana, ziviso yepamutemo, uye zvinongedzo kumabhatani akasiyana emabhurawuza ayo anogona kukubatsira iwe kugadzirisa ruzivo, sekuona Chromecast mune yakazara skrini, yekuenderana kweHLS .js , kupisa zvemukati, nezvimwe.
VPN: imenyu ine zvimwe zvinongedzo kune anozivikanwa uye akanakisa mhando maVPN ekushambadzira zvemukati.
Ehe saizvozvo, ine zvakare Injini yekutsvaga maunogona kutsvaga nemazita echiteshi kana zvemukati zvauri kutsvaga.
Zviri pamutemo here?
Izvi zvinoenderana newe. Kana iwe ukatarisa chiteshi chenyika cheDTT chinotepfenyura mweya wakashama, pamwe nedzimwe nzira dzekunze dzinotepfenyurawo mweya wakashama pasina zvirambidzo zvematunhu, iyo Photocall TV chikuva chiri pamutemo chose. Kune rimwe divi, kana iwe ukashandisa ino portal kuona zvirimo kubva kune akabhadharwa makiteshi anotepfenyura akavharidzirwa, kana nerumwe rudzi rwekurambidzwa kwenzvimbo yako yenzvimbo, chikuva chinobva changove chisiri pamutemo.
Photocall TV ine oparesheni yakapusa. Iwe haudi mutengi app yakaiswa semamwe akawanda mapuratifomu. Mune ino kesi haufanire kuisa chero chinhuSimply svikira peji yaro yepamutemo kubva pane yako yaunofarira webhu bhurawuza uye ichakuratidza zvakananga iro rese catalog yeinowanikwa TV neredhiyo chiteshi kuti utange kuona. Zvese zviri online!
Zvakare, chimwe chinhu chakanaka ndechekuti hapana kudiwa marekodhi, saka haufanire kusiya yako yakanyoreswa email kana chero rumwe ruzivo. Ingoenda kune iyo tabo yezvinyorwa iwe zvaunoda kuona, tinya pane icon yeiyo yakasarudzwa chiteshi, uye zvinhu zviviri zvinogona kuitika:
Dzvanya pikicha uye vhura iyo nyowani yebrowser tebhu nemutambi kuti dzvanya katatu (Tamba) ku tanga kuona chiteshi chaicho.
Kana kuti a donhedza pasi menyu kana iyo chiteshi iine sarudzo dzinoverengeka dziripo. Idzi sarudzo dzinowanzo tarisa ruzivo, tarisa yepamutemo YouTube chiteshi cheiyo chiteshi, kana kuona zvirimo zviripo ... Kana iwe ukabaya kuti uzvione, chinhu chimwe chete icho chichaitika sepfungwa yekutanga.
Photocall TV mhando uye kugadzikana?
Kusiyana nemamwe mapuratifomu, Photocall TV ine yakawanda ye Buena calidad mufananidzo, kunyangwe izvi zvakare zvichitsamira pane yakasarudzwa chiteshi, havazi vese vane mhando imwechete. Ehezve, kuve online uye wakasununguka, usatarisira 4K zvishamiso kana chero zvakadaro.
Kune rimwe divi, chikuva chinopawo a kugadzikana kwakanaka. Chinhu chausingawanzo kuwana mune mamwe maapplication kuti uone mhando iyi yezviri mukati kana mamwe mawebhusaiti uko vhidhiyo inodimburwa kana kuomeswa nechando yega yega nhatu. Zvekare, sekune mhando, izvi zvinogona zvakare kuvimba nesarudzo yakasarudzwa.
Kwete, Photocall TV zvakasununguka zvachose. Haufanire kubhadhara chero mhando yekuwana kana kuchengetedza kunyoreswa semamwe masevhisi eprimiyamu. Izvi, pamwe chete nekirabhu yakakura yematanho uye nemhando yebasa, zvaita kuti chikuva ichi chive chimwe chevanofarira vashandisi vazhinji.
Chimwe chokwadi chiri chokwadi pamusoro pechikuva ichi ndechekuti kana iwe ukabaya pane chiteshi icon uye nekuwana zvirimo, kutamba kunotanga pakarepo, hapana shambadziro dzinotsamwisa.
Ndezvipi zvishandiso zvainogona kushanda pairi?
Kuva sevhisi yepamhepo, Photocall TV ichave inowanikwa pane hombe nhamba yemidziyo. Iwe unongoda chete inoenderana webhu bhurawuza uye hazvina basa nesisitimu yekushandisa kana dhizaini yekombuta yako. Izvo zvinoita kuti ive inoshanda kune:
MaPC ane GNU / Linux, Windows, FreeBSD, macOS, nezvimwe.
Vhidhiyo yemitambo inonyaradza seSony's PlayStation kana Microsoft's Xbox.
Smart TV, uye kunyange maTV kuburikidza neChromecast.
IOS / iPadOS uye Android nhare mbozha. Zvakare neTV Mabhokisi.
Maitiro ekuona Photocall TV pane yangu kifaa
Kuti utange nakidzwa neiyo Photocall TV sevhisi izvozvi, matanho ekutevera akanyanya nyore ...
Tarisa Photocall TV online paPC yangu
Zvisinei nesisitimu yekushandisa iwe yauri, zvichave zvakakwana kutevera izvi nhanho:
Vhura waunofarira web browser.
Enda kune Yepamutemo webhusaiti ye Photocall TV.
Famba iyo tebhu uye chiteshi chaunoda kutanga kuona uye ndizvozvo ...
Nenzira, kana uchinge uchitamba zvirimo, unogona kuwana akateedzana e zvirongwa zvekutamba. Semuenzaniso, iwe unogona kugadzirisa iyo vhidhiyo mhando kuti ikwane bandwidth yako, kudzikisa kana kukwidza vhoriyamu, kumbomira kana kuenderera nekutamba, kugona kuisa izvo zvirimo mune yakazara skrini, nezvimwe.
Wona Photocall TV pane yangu mbozhanhare
Kunyangwe iri piritsi kana smartphone, ine iOS / iPadOS, FireOS, kana neAroid, matanho anotevera akafanana chaizvo nePC, nekuti webhusaiti yePhotocall TV yakanyatsogadziriswa kune iyi nhare mbozha:
Mune ino kesi, zvirongwa zvekutamba zvingave zvakare zvakafanana nePC.
Ona Photocall TV pane yangu Smart TV
Pane smart TV iwe unogona kusarudza sarudzo mbiri:
Imwe yacho ndeyekuyedza kana iyo web browser iyo inosanganisira yako inoshanda sosi yeWebOS, TizenOS, Android TV, nezvimwe, inoenderana nerudzi urwu rwekutenderera (kazhinji hongu), uye uritambe kubva kubhurawuza rako reTV uchitevera matanho akafanana nePC kana nhare mbozha
Imwe yacho iri kuburikidza Chromecasts, kana ichienderana. Kana zvirizvo, unogona kushandisa nharembozha yako uye kurodha pasi kunyorera kubva kuGoogle Play kana App Store Webhu Vhidhiyo Yekutengesa. Aya anotevera matanho kana chromecasting yagadziriswa uye iyo app yaiswa iiri:
Vhura Webhu Vhidhiyo Cast pamusoro kana nhare.
Iyo app ichaita seye browser, ichikwanisa kuvhura Photocall TV mairi. Dzvanya panzira yaunoda kutarisa uye kutamba kunotanga.
Dzvanya pa icon inoratidzika kunge skrini ine chiratidzo kuti utange kufambisa uye ichatanga kuoneka pane yako TV skrini.
Dzimwe nzira dzekuona DTT neredhiyo
Pakupedzisira, sekuziva kwako, varipo dzimwe nzira dzakawanda kukwanisa kutarisa chiteshi cheterevhizheni uye zvakasiyana zvemukati zvemahara pane ako zvishandiso. Sarudzo huru kune avo vasingade kubhadhara Disney +, HBO, Netflix, Amazon Prime Vhidhiyo, Rakuten tv, Atresplayer, FlixOlé, nezvimwe.
Dzimwe dzedzimwe nzira ne mhando iri nani uye inoshamisa, kune avo Photocall TV inoita seisina kukwana kana kuda zvimwe zvakasiyana zvemukati, ndeaya:
Pluto TV: chikuva chakanakisa chine huwandu hwemakiteshi uye akasiyana uye emahara zvemukati zviri kukura zvakanyanya. Iyi 2021 yavanoronga kupera ne100 chiteshi pakati pawo iwe yaunogona kuwana mafirimu, akateedzana, zvemukati zvevana, nezvimwe.
Rakuten tv: kana iwe ukaisa iyo app iwe unozokwanisa kuwana zvachose yemahara zvemukati, neakawanda mafirimu anovandudzwa nguva nenguva. Pasina kubhadhara kubhadhara kwekutanga. Iko kune zvakare iyo online vhezheni.
VLC: inonakidza yemahara uye yakavhurwa sosi multimedia player yatakataura nezvayo kakawanda muLxA zvakare mukana, nekuti inotsigira zvinongedzo uye mafomati MD, JSON, M3U8, M3U, ENIGMA2, nezvimwe, kuti vakwanise kuona nzira dzekushambadzira, kuwedzera yako IPTV zvinyorwa.
Guvva: kuita kwakazara kwenzvimbo yemultimedia uko kwaunogona kunakidzwa nezvose zvirimo paPC yako, Bhokisi reTV, kana nhare mbozha. Iyi software inokutendera iwe kuti uise kuwanda kwemaAddon kuwedzera mikana yayo, pamwe nekuwedzera redhiyo uye IPTV zvinyorwa.
Yemahara DTT: ndeye webhusaiti ine zvinongedzo kune zvinonyanya kufarirwa nzira dzeDTT kuSpain kuwana zvemukati zvemahara uye zvepamhepo. Mashandiro ayo akafanana chaizvo neayo ePhotocall TV, chete iyo inokutungamidza iwe kune yepamutemo webhusaiti yeiyo chiteshi. Uye zvakare, iyo katarogu yematanho yakakamurwa nezvikamu, kuti zvive nyore kwauri kuti uwane zvauri kutsvaga.
eFilm: kana uine kadhi yeraibhurari yeruzhinji, iwe unogona zvakare kuwana ino yepamhepo zvemukati chikuva mahara uye zviri pamutemo. Iyo ine zviuru zvezvikamu, mafirimu, zvikabudura, nezvimwe.
TDTChannel: yakavhurika-sosi dhatabhesi iyo inokupa iwe kuwana kune yakawanda yeTV neredhiyo chiteshi zvemahara uye zviri pamutemo. Iyo zvakare ine maapplication eIOS uye Android nhare mbozha.
Muudze: imwe webhusaiti inounganidza huwandu hwezvibatanidza kune emahara uye epamutemo DTT chiteshi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Photocall TV: iyo chaiyo gwara rekuona TV neredhiyo chiteshi zvemahara